မြစ်ဆုံ Media Group: February 2016
သီပေါမြို့ မြို့လယ်ရပ် နှင့် ဇက်စုရပ် ဆက်ယှက်နေသော ရထားလမ်းတွင် မိုင်းထောင်ထား။ မီးရထား ဝန်ထမ်းမှ တွေ့ရှိရာ တပ်မတော် နှင့် ရဲတပ်ဖွဲ့မှ ဖယ်ရှားရှင်းလင်းပြီး။ အများပြည်သူ မထိခိုက်။
"TNLA သောင်းကျန်းသူ အဖွဲ့၏ ဝါဒဖြန့် ဘိန်းခင်းဖျက်စီးမှု နောက်ကွယ်မှ ဖြစ်ရပ် များ"
"TNLA သောင်းကျန်းသူ အဖွဲ့၏ ဝါဒဖြန့် ဘိန်းခင်းဖျက်စီးမှု နောက်ကွယ်မှ ဖြစ်ရပ် များ" ယခု တစ်လော FB မှာ TNLA အဖွဲ့ဘိန်းခင်းဖျက်ဆီးနေမှုအား တပ်မတော် မှ ထိုးစစ်ဆင်ဟန်တား နေ တယ် ဆိုပြီးPSLA/'TNLA Page က နေ ဝါဒ ဖြန့် နေတာကို fb user များ တွေ့မြင်ရ မှာဖြစ်ပါတယ်။ အခြေ အနေ အမှန်ကို အထောက်အထားအခိုင်အမာနဲ့ ks တင်ပြ လိုပါတယ်။ နမ့်ခမ်းနဲ့ကွတ်ခိုင် မြို့နယ် အတွင်း မှာရှိတဲ့ ဒေသခံ ရွာသူ /ရွာသား များဟာ၎င်းတို့ရဲ့စား ဝတ် နေရေး အတွက် တောင် ယာ စိုက် ပျိုး ရပေမဲ့ အနည်းငယ်သာ ရှိပြီး အများစု မှာ တရားမဝင် ဘိန်းစိုက်ပျိုး ခြင်း ကို အဓိက လုပ်ကိုင် ကြ ပါတယ်။ ၄င်းဘိန်းစိုက်ပျိုးခြင်းကို အချို့ဒေသခံမျာိးုက်ပျိုးသလို တရုတ်လူမျိုးများလည်းစိုက် ပျိုးကြပါတယ်။ အများစုမှာ တရုတ်လူမျိုးများမှ ဒေသခံရွာသူ/ရွာသားများအား ဘိန်းတစ်ရာသီ တွင် ၁(တစ်)ဧက အတွက် တရုတ်ယွမ်ငွေ (၁၀၀၀၀)ပေးပြီး အငှားစိုက်ပျိုး ခိုင်းခြင်းဖြစ်ပါတယ်။ လက်နက်ကိုင်သောင်းကျန်းသူ များ နယ်မြေ အတွင်းရှိခြင်း တရားဥပဒေ လက်လှမ်းမမှီခြင်း တို့ကြောင့် တရုတ် လူမျိုးများနဲ့ ဘိန်းစိုက် ဒေသ ခံများဟာ အဲ့ဒီဒေသရဲ့လက်နက်ကိုင် သောင်းကျန်းသူ TNLAအဖွဲ့အား ဘိန်း ၁(တစ်)ဧက စိုက်ပျိုးရန်မြန်မာငွေကျပ် သိန်း'၄၀(လေးဆယ်)ဆပ်ကြေး ကြိုတင်ပေး သွင်းပြီးမှ စိုက်ပျိုးရပါတယ်။ ဒါ ဟာ မြန်မာပြည်အရှေ့မြောက် နဲ့မြောက်ဘက် KIA လက်နက်ကိုင်အဖွဲ့ အစည်းများ ရှိ တဲ့ဒေသ မှာ ဘိန်းအတွက်ဆပ်ကြေးပေးရသော နှုန်းထားဖြစ်ပါတယ်။ အကြောင်းအမျိုးမျိုးကြောင့် ဆပ်ကြေးမပေးဆောင် နိုင်ပါက ဖမ်းစီးခေါ်ဆောင် ထားပြီး ငွေဖြင့် လူ အား ရွေးခိုင်းခြင်းတပ်သားသစ်အဖြစ် အတင်းစုဆောင်း ခြင်း ရိုက်နှပ် နှိပ်စက်ခြင်း ပလောင်မဟုတ်ပဲ အခြား တိုင်းရင်းသား ဖြစ်ပါက သတ်ဖြတ်ခြင်း အထိ လုပ်ဆောင် ပါတယ်။ တဘက်တွင် လူမှုကွန်ယက်မှ ဘိန်းခင်းဖျက်ဆီးနေ သယောင် အယောင်ပြခဲ့ပါတယ်။ တပ်မတော် မှ နယ်မြေရှင်းလင်းရေးတာဝန်များ ထမ်းဆောင်သည့် အခါ ဘိန်းခင်းတွေ့သမျှ ဖျက်ဆီး သောအခါ TNLAအဖွဲ့ဟာ ဘိန်းခင်း များဖျက်စီးခံရသည့် အတွက်ဘိန်းစိုက် တရုတ် များထံမှ ဆက်ကြေး ကောက်ခံ၍ မရ တော့ခြင်း ၄င်းတို့အဖွဲ့၏ အဓိက ဝင်ငွေမှာ ဘိန်းသာ ဖြစ်ခြင်း များကြောင့် တပ်မတော် က TNLA ဘိန်းခင်းဖျက် အဖွဲ့အား ပစ်ခတ်တားဆီး သယောင် ယောင် ဝါဒ ဖြန့် ခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။ တပ်မတော် နှင့် ရင်ဆိုင်မတိုက် ခိုက်ရဲပဲဘိန်းရာသီ တွင် ဆပ်ကြေးကောက်ခြင်းကိုသာ ဆောင်ရွက် နေသော TNLA အ ကြောင်းအား နမ့်ခမ်းနဲ့ကွတ်ခိုင်မြို့နယ်အတွင်းက ဒေသခံပြည်သူ အားလုံးသိ ရှိ ထားပြီးဖြစ်ပါတယ်။ တပ်မတော် စစ်ကြောင်းများဟာ နမ့်ခမ်းနဲ့ကွတ်ခိုင် မြို့နယ် နှစ်ခု နယ်မြေ အတွင်းဘိန်းခင်းဖျက်ဆီးမှုအား ၂၀၁၆ ခုနှစ်ဖေ ဖော်ဝါရီလ လဆန်းပိုင်းမှ စတင်ဆောင်ရွက် ခဲ့ပြီး ဘိန်းခင်း ဧက ၂၀ ရှိခဲ့ပြီး တပ်မတော် မှ ဘိန်းခင်းဖျက်ဆီးနေစဉ်ဘိန်းဆပ်ကြေးကောက် TNLA အဖွဲ့နှင့် ထိတွေ့တိုက်ပွဲဖြစ်ပွားခဲ့ပြီး တပ်မတော်မှ လေကြောင်းပစ်ကူယူပြီး တိုက်ခိုက်ရာTNLA သောင်းကျန်းသူအဖွဲ့ အကျအဆုံး များစွာဖြင့် ဆုတ်ခွာ ခဲ့ရပြီး TNLAအဖွဲ့ဖမ်းစီးထား သည့် ဒေသခံ ဘိန်းစိုက် တောင်သူ တစ်ဦး ကို တပ်မတော် မှဖမ်းစီး ရရှိခဲ့ပါတယ်။ TNLAအဖွဲ့ ဖမ်းစီးခံ ရွာသားတစ်ဦးပြောပြချက် အရ ၄င်းနှင့် အတူ ဘိန်းဆပ်ကြေးမပေး နိုင်သူ ၁၈ ဦးအား TNLA အဖွဲ့မှ ဖမ်းစီး ထားပြီး လောလောဆယ်တွင်ဆပ်ကြေး ၄သိန်းမှ ၁၀ သိန်းကြား ပေး ဆောင်ရကြောင်း လာရောက်တောင်းယူသည်မှာ ၃/၄ကြိမ် ခန့်ရှိကြောင်း ပြီးခဲ့ သောဇန်နဝါရီလ အတွင်း ငွေကျပ် သိန်း၁၅၀ ကျော်ပေးခဲ့ရကြောင်း ၄င်းနယ်မြေတွင် TNLAအဖွဲ့အား ငွေမပေးပဲ ဘိန်း စိုက်၍ မရကြောင်း နှင့် ငွေမပေးသူအချို့အား ၄င်း တို့အဖွဲ့အတွင်းဝင်စေခြင်း အခြား တိုင်းရင်းသားဖြစ်ပါက ပစ်ခတ်သတ်ဖြတ်ခြင်းများ ပြူလုပ်ကြောင်း ပြော ကြားခဲ့ပါတယ်။ အထက်ပါ TNLA အဖွဲ့၏ ဆပ်ကြေးယိူန်းစိုက်ခွင့်ပြု နေ မှု များ အားဖုန်းကွယ် ရန် လူမှု ကွန်ယက်ပေါ်တွင် TNLAအဖွဲ့ဘိန်းဖျက်ဆီးနေ မှုအား တပ်မတော်ကဟန့်တား သယောင်ယောင် ဝါဒဖြန့်မှုများ နောက်ကွယ် မှ အခြေအနေ အမှန်အား သိ ရှိရန် တင်ပြလိုက်ပါတယ်။ တကယ်ဘိန်းခင်းဖျက်ရတာ ဒီ လူတွေပါ။ ကျော်စွာ
သို့/ ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည် NLD ပါတီ
သို့/ ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည် NLD ပါတီ NLDပါတီကြီးစိုးသော် လွှတ်တော် အကြောင်းအရာ။....။အောက်ပါအကြောင်းအရာတို့ကိုဖတ်ကြည့်ပြီး မည်သို့ ကြိုတင်မည်ကို ပွင့်လင်းမြင်သာစွာ ပြည်သူလူထုအား အသိပေးပါ။ ပြည်သူတစ်ဦး။ =========================== █ ပြီးခဲ့တဲ့ သတင်းနှစ်ပတ်ကျော်တုံးကတော့ နော်ဝေနိုင်ငံ၏မြို့တော်ဖြစ်သောအော်စလို (ငြိမ်းချမ်းရေးနိုဘယ်လ်ဆု တံဆိပ်ခတ်ရာမြို့) အားမွတ်ဆလင်မြို့တစ်ခုအဖြစ် သို့ မဟုတ် မွတ်ဆလင်နိုင်ငံတော်အဖြစ်သတ်မှတ်ပေးခြင်း မရှိလျှင် ဂျီဟတ် (Holy War)ကြေညာပြီးအရ ယူမည်ဟု နော်ဝေရှိမွတ်ဆလင်ကုလားအကြမ်း ဖက်အဖွဲ့အန်ဆာ အယ်လ်- စန်နာ (Ansar al- Sunna) က နော်ဝေအစိုးရနှင့်နော်ဝေနိုင်ငံသား များကိုရာဇသံပေးခဲ့ပါတယ်။ အဆိုပါအကြမ်းဖက် အဖွဲ့ ၏ထုတ်ပြန်ကြေညာချက်တွင် "ငါတို့ ဟာ နော်ဝေလူ့ အဖွဲ့ အစည်းရဲ့အစိတ်အပိုင်းအဖြစ် အလိုမရှိတော့ဘူး" ... ဟု ပြောင်ပြောင်တင်းတင်း ပြောခဲ့ပါတယ်။....။ ----------------------------- █ သည်အပတ်ထဲမှာတော့ နော်ဝေနိုင်ငံအော်စလို မြို့တော်မှာရှိနေတဲ့ ရဲအရာရှိတွေကိုယ်တိုင်က "အော်စလိုမြို့ဟာ အစ္စလမ်လက်ထဲကိုရောက်သွား ခဲ့ပြီ" လို့ ကြေညာထုတ်ပြောတဲ့အဆင့်အထိကို ရောက်လာခဲ့ပါပြီ။....။ လွန်ခဲ့တဲ့ (၁၀) နှစ်အတွင်းမှာ ဒုက္ခသည်အမည်ခံ မွတ်ဆလင်ကုလားတွေဟာ Oslo Grønland လို့ခေါ်တဲ့ အော်စလိုမြို့ရဲ့ လူဆင်းရဲများနေထိုင်ရာခရိုင် မှာစုဝေးနေထိုင်ခဲ့ကြပါတယ်။ သည့်နောက်မှာတော့ ကုလားဦးရေများလာချိန်မှာ ဌာနေ နော်ဝေလူမျိုးများ ကပြောင်းရွှေ့ သွားခဲ့ကြပြီး ဆယ်စုနှစ်တစ်ခုအတွင်း မှာ နော်ဝေသမိုင်းတွင်မရှိခဲ့သည့် မုဒိန်းမူနှင့် ဓါးပြမူ များဖြစ်ပွားရာ ဒေသဖြစ်နေခဲ့ပါပြီ။ နေ့ ခင်းကြောင် တောင်လူယက်မူ - ဘလက်ကာယပြုကျင့်မူ ကိုယ် ထိလက်ရောက်စော်ကားမူ စသည်ဖြင့် လူမဆန် သည့်ပြစ်မူပေါင်းစုံအားကျူးလွန်နေခဲ့ကြသည်။ မုဒိန်းကောင်အားလုံးမှာ အခြားနိုင်ငံများမှရောက် ရှိလာသော (နေထိုင်ခွင့်လျှောက်ထားသူများ) Asylum Seekers တနည်းအားဖြင့် မွတ်ဆလင် ကုလားများဖြစ်ကြတယ် လို့ အော်စလိုရဲကထုတ် ဖေါ်ပြောပါတယ်။ "Has it sometimes happened that our ethnic Norwegians have committed such rapes?" "နော်ဝေနိုင်ငံသား နေဝေလူမျိုးတိုင်းရင်းသားတွေ ရော သည်လိုမုဒိန်းမူမျိုးတွေ တစ်ခါတစ်ရံမှာ မကျူး လွန်ကြဘူးလား?" .... ဟူသော မေးခွန်းကို ရဲအရာ ရှိက အခုလိုဖြေကြားသွားခဲ့ပါတယ်။ "No, there has not been any such cases at us the violence and sex department of Oslo." "ဟင့်အင်း သည်လိုလိင်မူဆိုင်ရာအကြမ်းဖက်မူမျိုး တွေ အော်စလို ရဲဌာနရဲ့သမိုင်းမှာ မရှိခဲ့ပါဘူး" လို့ပြန်လည်ဖြေကြားသွားခဲ့ပါတယ်။ █ The women are being raped at night in Oslo, and the men are robbed more than ever. In just the past ten years more than 4,000 people have been robbed in the town center and the area of the Grønland police station [an immigrant ghetto]. အော်စလိုမှာ ညဘက်ဆိုရင် အမျိုးသ္မီးတွေ မုဒိန်းကျင့်ခံရတတ်တယ်။ ယောင်္ကျားတွေ ကဓါးပြတိုက်ခံရတတ်တယ်။ သည်ဆယ်နှစ်အတွင်း မှာ (လူဝင်မူကြီးကြပ်ရေးက သတ်မှတ်ပေးထားတဲ့) ဓါးပြမူပေါင်း လေးထောင်ကျော် (၄၀၀၀) ဟာ - Grønland ရဲစခန်းအပိုင်ဒေသရဲ့ နိုင်ငံခြားက၀င်ရောက်လာသူတွေ ကိုထားရှိရာ ဒေသမှာဖြစ်ပွားခဲ့တာလို့ ဆိုပါတယ်။....။ ♥ HlaingBwa လှိုင်ဘွား ♦ ref: http://viral247news.com/oslo-police-declare-we-have-lost-t…/
ဘာကြောင့်အဲဒီလိုပြောသလဲ ထိုင်းနိုင်ငံကိုအာဏာသိမ်းလိုက်တဲ့ ကာကွယ်ရေးဦးစီချုပ်သည် သူအာဏာမသိမ်းခင်အထိ ဗုဒ္ဓဘာသာဝင်အဖြစ်အယောင်ဆောင်နေလေ၏
အခုသူလဲအာဏာရရော သူဟာအစ္စလာမ်ဘာသာဝင်ဖြစ်တဲ့အကြောင်း တရားဝင်ကြေငြာလိုက်လေ၏
ဗုဒ္ဓဘာသာဘုန်းတော်ကြီးတွေတရားဟောရင်ဟောလို့ရတဲ့ငွေကို အခွန်ဆောင်ရမယ် ထိုင်းနိုင်ငံမှာရှိတဲ့အစ္စလာမ်ဘာသာဝင်တွေ မက္ကာကိုဘုရားဖူးခေါ်ဟာဂျီဘွဲ့သွားယူရင် နိုင်ငံတော်စရိတ်နဲ့သွားရမယ်
ပရမတ္ထတရား၏ ဆန့်ကျင်ဘက်များ -------------------------
ပရမတ္ထတရား၏ ဆန့်ကျင်ဘက်များ ------------------------- လူတို့သည် ပညာရှင်များကို ကိုးကွယ်ဆည်းကပ် တတ်ကြသည်။ သူတို့ပြောသမျှ ဟုတ်လှပြီထင်ပြီး လေးစားလိုက်နာတတ်ကြသည်။ အချို့သောပညာရှင်များပြောသွားသည့် စကားများသည် သမိုင်း ဝင်လောက်အောင် တက်တက်စင် လွဲမှားသွားကြောင်း တွေ့ရ သည်။ ဟိတ်ဟန်ဖြင့် ပြောလိုက်သည့် ကမ္ဘာကျော် စကားများမှာ ယခုခေတ်နှင့် ကြည့်လျှင် အရူးစကားများ ဖြစ်သွားကြောင်း တွေ့ရပေလိမ့်မည်။ ၁၉၇၇ခုနှစ်တွင် Digital Equipment Corporation ကို တည်ထောင်သူ ကက်နက်အော်လ်ဆန်ဆိုသူက စကားတစ်ခွန်း ပြောသွားသည်။ ''လူတိုင်း သူတို့အိမ်တွေမှာ ကွန်ပျူတာတစ်လုံးစီ ထားစရာအကြောင်း မရှိဘူး''ဆိုသည့် စကားဖြစ်သည်။ သူပြောချင်သည်က မည်သူမျှ အိမ်တွင် ကွန်ပျူတာ ဆောင်ထားလိမ့်မည် မဟုတ်ဟု ဆိုလိုခြင်းဖြစ်သည်။ ယနေ့ခေတ်တွင် လူတိုင်း ကွန်ပျူတာအနည်းဆုံး တစ်လုံးလောက်နှင့် အလုပ်လုပ်နေကြသည်။ အိမ်တိုင်းတွင် တစ်လုံးမက ဆောင်ထားသည်။ ရုံးတိုင်းတွင် လူပေါက်စေ့နီးပါး ကွန်ပျူတာများ သုံးနေကြသည်။ ကက်နက် တစ်ယောက် လွဲသွားသည်။ ၁၉၁၁ ခုနှစ်က ပြင်သစ်စစ်တပ်မှ မာရှယ်ဖာဒီနန်ဖို့ခ်ျဆိုသူသည် ''လေယာဉ်ပျံတွေဟာ စိတ်ဝင်စားစရာ ကောင်းတဲ့ ကစားစရာ အရုပ်တွေပေါ့။ စစ်တပ်အနေနဲ့ကတော့ ဘာမှတန်ဖိုး မရှိပါဘူး''ဟု ဆိုလိုက်သည်။ သူလည်း အလွဲကြီး လွဲသွားသည်။ ယခုခေတ်တွင် လေတပ် ဆိုသည်မှာ လေယာဉ် မပါဘဲ ဖွဲ့စည်းနိုင်သည် မဟုတ်။ လေယာဉ် မပါဘဲ အောင်ပွဲဆင်နိုင် သည့် တိုက်ပွဲများလည်း မရှိသလောက် ရှားသွားပြီဖြစ်သည်။ ''အနာဂတ်မှာ သိပ္ပံပညာ ဘယ်လောက်တိုးတက်တယ်ပြောပြော လပေါ်ကို လူဘယ်တော့မှ မရောက်နိုင်ဘူး'' ဟု ပြောသွားသူမှာ ရေဒီယိုနှင့် အော်ဒီယွန်မီးလုံးကို တီထွင်ခဲ့ သူ ဒေါက်တာလီဒီဖောရက်စ်ဖြစ်သည်။ သူက ၁၉၆၇ ခုနှစ်တွင် ပြောခဲ့ခြင်းဖြစ်ပြီး ၁၉၆၉ ခုနှစ်တွင် လပေါ်သို့ လူသားများ စတင်ခြေချနိုင်ခဲ့သည်။ ''ရုပ်မြင်သံကြားဆိုတဲ့ဟာ ကြည့်နေ ဈေးကွက်ထဲမှာ ၆ လတောင်ခံမှာ မဟုတ်ဘူး။ ဒီသစ်သားသေတ္တာလေးကို ညတိုင်း ဘယ်သူတွေက အကြာကြီး ထိုင်ကြည့်ချင်မှာလဲ''ဟု ဒါရိုင်းဇာနပ်ဆိုသူက ပြောခဲ့သည်။ သူသည် ၁၉၄၆ ခုနှစ်တွင် 20th Century-Fox ရုပ်ရှင်ကုမ္ပဏီကြီး၏ အကြီးအကဲတစ်ယောက်ဖြစ်သည်။ ရုပ်ရှင်လုပ်ငန်းလောက် ရုပ်မြင်လောကကို မထွန်းကားနိုင်ဟု ထင်ခဲ့ရာမှ ရုပ်မြင်ကြောင့် ရုပ်ရှင်လောက ကျဆင်းသွားခဲ့ရသည်။ ''သူတို့အသံတွေကို မကြိုက်ဘူး။ ဂစ်တာကို အုပ်စုလိုက်တီးတာ ခေတ် မရှိတော့ဘူး''ဟု ၁၉၆၂ ခုနှစ်က Decca ဓာတ်ပြား ထုတ်လုပ်ရေးကုမ္ပဏီ က ပြောပြီး The Beatles အဖွဲ့ကို ငြင်းပယ်လိုက်သည်။ Beatles အဖွဲ့သားများကို အသံတွေက ကြောင်တောင်တောင်၊ တီးခတ်မှုကလည်း ယောင်တောင်တောင်ဟု သတ်မှတ်ပြီး ငြင်းပယ်လိုက်ခြင်းမှာ အမှားကြီး မှားသွားမှန်း နောက်မှ သိလိုက်ရသည်။ ထိုအဖွဲ့သည် တေးဂီတ သမိုင်းတွင် အအောင်မြင်ဆုံးဖြစ်ခဲ့ရသည်။ ''ဆက်သွယ်ရေးလုပ်ဖို့ တယ်လီဖုန်းဆိုတဲ့ဟာမှာ အားနည်းချက်တွေ အများကြီး။ သုံးစားလို့ရမယ့်ဟာ မဟုတ်ပါဘူး''ဟု မှတ်ချက်ချသွားသူမှာ Western Union Internal Memo ကုမ္ပဏီဖြစ်သည်။ သူတို့က ၁၈၇၆ ခုနှစ်တွင် ထိုမှတ်ချက်ကို ပေးသွားခြင်းဖြစ်သော် လည်း တယ်လီဖုန်းသည် မရှိမဖြစ်ပစ္စည်းတစ်ခု ဖြစ်လာခဲ့ရသည်။ ''ကမ္ဘာကြီးသည် စကြဝဠာ၏ ဗဟိုတွင်ရှိသည်''ဟု ပြောသွားသူမှာ အီဂျစ်နက္ခတ်ဗေဒ ပညာရှင် တိုလမီဖြစ်သည်။ သူက ၂ ရာစုခန့်တွင် ထိုဟောကိန်းကို ထုတ်သွားသော်လည်း ၁၆ ရာစုခန့် တွင် ကော်ပါးနီးကပ်စ်က သူ့အဆိုကို ပြောင်းပြန်လှန်လိုက်သည်။ စကြဝဠာတွင် နေသည်သာ ဗဟိုဖြစ်ကြောင်း ကော်ပါးနီးကပ်စ်က သက်သေထူ သွားနိုင်ခဲ့သည်။ ''ဒီနေ့လောက် အရေးကြီးတဲ့နေ့ မရှိနိုင်တော့ဘူး''ဟု ဆိုခဲ့သူမှာ တတိယမြောက် ဂျော့ဘုရင်ဖြစ်သည်။ ၁၇၇၆ ခုနှစ် ဇူလိုင် ၄ ရက်နေ့ကိုရည်စူး ပြီး ပြောခဲ့ခြင်းဖြစ်သည်။ ထိုနေ့သည် အမေရိကန်ပြည်ထောင်စု၏ လွတ်လပ်ရေးနေ့ဖြစ်သည်။ လူ့ဘောင်သမိုင်းတွင် ဖြစ်စဉ်တို့သည် ရပ်တန့်နေမည်မဟုတ်။ ဆင့်ကဲဖြစ်စဉ်၊ ပြောင်းလဲမှုဖြစ်စဉ်များကို လက်ခံကြရမည်။ သမိုင်းတွင် ပြုပြင်ပြောင်းလဲမှုတွေ တစ်ခုပြီးတစ်ခု ဖြစ်လာသည်။ အားလုံးသည် လူသားသမိုင်းအတွက် အရေးပါခဲ့ကြသည်ချည်းဖြစ်သည်။ အမေရိကသမိုင်းတွင် လပေါ်အရောက် လူသားကို စေလွှတ်နိုင်ခြင်းမျိုး၊ လပေါ်တွင် ခြေချနိုင်ခြင်းမျိုးကိုလည်း ထိုနေ့လောက် အရေးပါသော နေ့ မရှိနိုင်ဟု နှောင်းလူများ ပြောကြပေလိမ့်မည်။ ''တီထွင်ခဲ့တာတွေ မှန်သမျှဟာ တီထွင်ပြီးသားတွေချည်းပဲ'' ၁၈၉၉ ခုနှစ် တွင် အမေရိကန်ပြည်ထောင်စုမှ မူပိုင်ခွင့် ကော်မရှင်နာမင်းကြီး ချားလ်စ် အိတ်ခ်ျဒူရဲလ်က ပြောကြားသွားခဲ့သည်။ သူဆိုလိုသည်မှာ လောက တွင် အသစ်အဆန်း မရှိတော့ဟု ဆိုလိုခြင်းဖြစ်သည်။ ယနေ့ခေတ်အနေဖြင့် ကြည့်လျှင် သူ့အဆို မှားသွားပြီဖြစ်သည်။ လူ့သမိုင်းတွင် မည်သူမျှ စိတ်မကူး ခဲ့ဖူးသည့် တီထွင်မှုပေါင်း များစွာ ပေါ်ပေါက်ခဲ့သည်။ ကွန်ပျူတာ၊ မိုဘိုင်းလ် ဖုန်း၊ တီဗီစသည်တို့က သက်သေဖြစ်သည်။ ကမ္ဘာကြီးတွင် မပြောင်းလဲခြင်းတရားဟူသည်မရှိ။ အားလုံးပြောင်းလဲနေ သည်။ ပုံသေတွက်ဆ၍ မရနိုင်သော ကိစ္စတွေကလည်း များလှသည်။ လူသားဆိုသည်က ရပ်တန့်နေသူများ မဟုတ်။ မသိမှုက တီထွင်မှုကို ဖြစ်စေ သည်။ မသိခြင်း ကို ရှေ့ဆက်လေ့လာအားထုတ်စရာတစ်ခုဟု မမြင်လျှင် တီထွင်မှုများလည်း မရှိနိုင်တော့ပေ။ တီထွင်မှုဆိုသည်မှာ လိုအပ်ချက်ကြောင့်လည်း ဖြစ်နိုင်သည်။ လိုအပ်သည် မလိုအပ်သည်ထက် စူးစမ်းဖော်ထုတ်မှု တစ်ခုအဖြစ် ရှိနေစေချင်သောကြောင့်လည်း ဖြစ်နိုင် သည်။ လူသားတို့ ကြံဆအားထုတ်မှုများကို တရားသေစွဲလမ်းထားရာက ယူဆချက်များကို ပြောင်းလဲစေခဲ့သည်မှာ သမိုင်းတွင် အထင်အရှား ဖြစ် သည်။ တီထွင်မှုတစ်ခုကို မဖြစ်နိုင်ဟုဆိုကာ လူသားတစ်ဦးခြင်း၏ ဆုံးဖြတ်ချက်များကြောင့် တိမ်မြုပ်ပျောက်ကွယ်ခဲ့ရသည် များလည်းရှိသည်။ တီထွင်လျှင် သေမည်ဟု ခြိမ်းခြောက်သော်လည်း မတီထွင်ရလျှင် မနေနိုင်သောကြောင့် အသက်နှင့်ရင်းကာ တီထွင်ဖော်ထုတ်သွားသူများ လည်း ရှိခဲ့သည်။ မဖြစ်နိုင်ဟု ပြောသည်ကို ဆက်ပြီးမကြိုးစားလျှင် လူသားဟူ၍ တည့်တံ့နိုင် မည်မထင်။
အကြမ်းဖျဉ်း အတိုချုံးပြောရမယ်ဆိုရင်..မြန်မာနိုင်ငံရဲ့ဝေဟင်ပိုင်နက်ကို တရားဝင်ဖြတ်ကျော်ပျံသန်းတဲ့လေယာဉ်/ရဟတ်ယာဉ်မှန်သမျှ..ဖြတ်ကျော်ပျံသန်းခွင့်(Over-fly Permission)တောင်းခံကြရပါတယ်..
လေဆိပ်/ပျံသန်းမည့် အမြင့်ပေ/ဦးတည်လမ်းကြောင်း/၀င်ထွက်-သတင်းပို့ လမ်းကြောင်း(Air Route & Reporting Point)-အစရှိတဲ့အချက်အလက်
တွေအနည်းဆုံးဖော်ပြပါရှိတဲ့ Flight Plan နဲ့တင်ပြတောင်းခံရပါတယ်.. (တကယ်ပျံသန်းတဲ့အခါ..အဲသည် Air Route အတိုင်းပျံသန်းရပါတယ်)
လေကြောင်းရန်ကာကွယ်ရေး/လုံခြုံရေးဆိုင်ရာရေဒါစခန်း(Radar Stations)တွေ..ရှာဖွေတွေ့ရှိစေဘို့အတွက်..လေယာဉ်မှာတပ်ဆင်ထားတဲ့ Transponder အသံလွှင့်စက်ကို..တောက်လျှောက်ဖွင့်ပေးထားရပါတယ်.(ဒီလိုTransponder ဖွင့်ထားပေးခြင်းဖြင့် မိမိလေယာဉ်အမျိုးအစား/ ပျံသန်း အမြင့်ပေ/ဦးတည်လမ်းကြောင်း/ ဖြတ်ကျော်ပျံသန်းခွင့်ပြုချက်အမှတ်-စတဲ့ အချက်အလက်တွေကို..အောက်ကရေဒါစခန်းကစီစစ်တွေ့ရှိစေမှာဖြစ်သလို.မိမိလေယာဉ်ဟာ.ရန်သူမဟုတ်မှန်းသိရှိစေတဲ့အပြင်..ကောင်းကင်မှာလေယာဉ်အချင်းချင်းမတိုက်မိစေအောင်လည်း..ထိန်းသိမ်းပေးစေနိုင်ပါတယ်)
အဲသည်လေယာဉ်မျိုးတွေ.သူ့လမ်းကြောင်းနဲ့သူ..ပျံသန်းနေတာပြဿနာမရှိပါဘူး.သို့သော်သူတပါးဝေဟင်ပိုင်နက်ထဲဝင်ရောက်ခဲ့မိရင်တော့..“Unknown”ပစ်မှတ်အနေနဲ့သတ်မှတ်ခံရပြီး.အိမ်ရှင်နိုင်ငံလေတပ်ရဲ့ကြားဖြတ်တိုက်လေ ယာဉ်(Intercepter)ရဲ့သတိပေးတားမြစ်ခြင်းနှင့်အတူ..ပိုင်နက်အပြင်ကို ပြန်လည်မောင်းထုတ်ခံရနိုင်ပါတယ်..
ဒါပေမဲ့..သာမန်စစ်အေးကာလအချိန်တွေမှာတော့..ရန်လိုတဲ့သဘောနဲ့မိမိကိုအန္တရာယ်တစုံတရာမပြုခဲ့ရင်..အဲသလို.အရမ်းကာရော..Sensitive ဖြစ်ပြီး..ပစ်တာခတ်တာမျိုးတွေ..ဘယ်တိုင်းပြည်မှမလုပ်ကြပါဘူး..လုပ်ခဲ့ ရင်ဖြစ်လာမဲ့ပြဿနာနဲ့.ဖြေရှင်းပေးလျော်ရမဲ့ကိစ္စတွေများမြောင်လို့ပါဘဲ..
လတ်တလောမြန်မာ့တပ်မတော်(ရေ)ကပြုလုပ်ခဲ့တဲ့..Sea Shield 2016 အထူးစစ်ရေးလေ့ကျင့်မှုတွေပြု လုပ်မည့်ကိစ္စအတွက်..ရေကြောင်း/လေ
ဒါကြောင့်တခါတရံ..အခြားလေယာဉ်/သဘောင်္တွေ..သတိမမူဘဲဖြတ်သန်းမိတာတွေရှိနိုင်ပါတယ်(လေယာဉ်အတွက်..အမြင့်ပေ၁၅,၀၀၀ အောက်မပျံသန်းရလို့ကန့်သတ်ခဲ့တဲ့အတွက်.အခြားပြည်ပလေယာဉ် ၃-စီးကအမြင့်ပေ ၂၀,၀၀၀ ကျော်ကနေ..သူ့Air Corridor အတိုင်း..သာမန်ဖြတ်ကျော်ပျံသန်းသွားတာလည်းဖြစ်နိုင်ပါသေးတယ်)(ပေ ၄-သောင်းလောက်လည်းဖြစ်နိုင်ပါတယ်)
ဒီလိုမျိုးဖြစ်လို့..ကျူးကျော်ဖောက်ဖျက်တယ်လို့ခံစားမှုဖြစ်လာခဲ့ရင်တောင်မှ.သက်ဆိုင်ရာနိုင်ငံ/ကုမ္ပဏီကိုသတိပေး/တိုင်ကြားစာပို့တာက..အကောင်းဆုံး ဖြစ်မှာပါဘဲ(သူတို့ငြင်းဆိုခဲ့ရင်တောင်. နောင်ကိုကြိတ်ပြီးဆင်ခြင်သွားနိုင်သလို နောက်တကြိမ်အခုလိုမျိုးထပ်ဖြစ်လာခဲ့လို့..တစုံတရာအရေးယူခဲ့ရင်.. ကိုယ့်အဆိုးမဖြစ်နိုင်တော့ဘူးပေါ့)
အဲ-နောက်ဆုံးအနေနဲ့ပြောချင်တာက..ထစ်ကနဲရှိမပစ်ချဘဲ..Target Interception & Lock သာလုပ်ပြတဲ့(ပစ်ချချင်ရင်ပစ်လို့ရတဲ့သဘော)အလေ့အကျင်မျိုးရှိစေချင်တာ ကတော့..မြန်မာနိုင်ငံကလတ်တလောမှာ..စစ်မက်ဖက်ပြိုင်နေတဲ့နိုင်ငံမဟုတ်သလို.နိုင်ငံတကာချစ်ကြည်ရေး Status မပျက်ယွင်းစေချင်တာပါ..ချစ်ကြည်ရေးဆိုတာပျက်တာလွယ်ပေမဲ့..ပြန်လည်တည်ဆောက်ရခက်ပါတယ်..
နောက်တချက်..ဟို-အရင်ကျနော် Pilot ငယ်ငယ်ဘ၀တုန်းက..အရှေ့/ အ
(တကယ်တော့..ကျနော့်ကို.တရုပ်ပြည်က၃-ကြိမ်၊ ထိုင်းက၂-ကြိမ်..တိုင်စာ အပို့ခံခဲ့ရဘူးပါသဗျာ)
ထိုင်းနိုင်ငံတွင် ကမ္ဘာလှည့်ခရီးသွား အမျိုးသမီး ၂ ဦးအား ကမ္ဘောဒီးယား ငါးဖမ်းလှေလုပ်သားများက အုပ်စုလိုက် ဝိုင်းမုဒိန်းကျင့်။ ----------------------------------------
ထိုင်းနိုင်ငံတွင် ကမ္ဘာလှည့်ခရီးသွား အမျိုးသမီး ၂ ဦးအား ကမ္ဘောဒီးယား ငါးဖမ်းလှေလုပ်သားများက အုပ်စုလိုက် ဝိုင်းမုဒိန်းကျင့်။
ယနေ့နံနက် ၁ နာရီ အချိန်မှာ ထိုင်းနိုင်ငံ သရခရိုင် ( ထိုင်း - ကမ္ဘေ္ဘာဒီးယား နယ်စပ်မြို့နယ် ) ကော့ကိုကျွန်း တွင် ရပ်နားထားသည့် စက်လှေပေါ်မှ ကမ္ဘောဒီးယား လှေထိုးသား ၅ ဦးက ညပိုင်းမှာ ကျွန်းပေါ်ရှိ ဟိုတယ်သို့ ပြန်လာသူ ကမ္ဘာလှည့် နိုင်ငံခြားသူ နှစ်ဦးကို အုပ်စုလိုက် ရိုက်နှက်မုဒိန်းကျင့် ခဲ့ကြကြောင်း သိရပါတယ်။
ကမ်းစပ်မှာ အမျိုးသမီး နှစ်ဦးဒဏ်ရာတွေနဲ့ လဲနေတာကို ဟိုတယ်ဝန်ထမ်း တွေက တွေ့ခဲ့ပြီးနောက် ရဲစခန်းကို တိုင်ကြားခဲ့ကြပါတယ်။ နယ်မြေခံ ရဲတပ်ဖွဲ့ဝင်များ စစ်တပ် ကျွန်းအုပ်ချုပ်ရေး အရာရှိတွေ အပါအဝင် လူ ၅၀ ကျော်မှ တစ်ကျွန်းလုံး ပိတ်ဆို့ရှာဖွေ ခဲ့ကြရာ မနက် ၄ နာရီမှာ တရားခံ ကမ္ဘောဒီးယား နိုင်ငံသား ၃ ဦးကို ဖမ်းမိခဲ့ကြောင်း နှစ်ဦးကတော့ တောတွင်း ထွက်ပြေးနေကြဆဲလို့ ရဲတပ်ဖွဲ့က သတင်း ထုတ်ပြန်ထားပါတယ်။
တရားခံတွေဟာ အသက် ၂၀ ကျော် လူငယ်တွေ ဖြစ်ကြပြီး ငါးဖမ်းစက်လှေ ရပ်နားထားစဉ် အရက်သောက် ကြပြီး ညပိုင်း ကမ်းစပ်မှာ ယောင်္ကျားလေး အဖော်မပါပဲ လမ်းလျှောက်နေတဲ့ နိုင်ငံခြားသူ နှစ်ဦးကို တွေ့ခဲ့ကြပြီး ဝိုင်းချုပ်၍ မုဒိန်းကျင့် ခဲ့ကြတာပါ။ တရားခံ တစ်ချို့က အမျိုးသမီး ၂ ဦးကို သတိမေ့အောင် ရိုက်နှက်ခဲ့ကြောင်း သိရပါတယ်။ အဆိုပါ အမျိုးသမီး နှစ်ဦးကို ဆေးရုံမှာ အရေးပေါ် ဆေးကုသပေးနေရကြောင်း ထိုင်းနိုင်ငံ Khaosod အွန်လိုင်း သတင်းမှာ ဖော်ပြထားပါသည်။
ထည့်မယ် ထည့်မယ် ဆီ ဆီ။ ကြေငြာနဲ့တင် ကြွေလောက်တယ်။
ထည့်မယ် ထည့်မယ် ဆီ ဆီ။
ကြေငြာနဲ့တင် ကြွေလောက်တယ်။ ကိုကိုလဲ လာထည့်မှာပေါ့ကွယ်။
ပြည်မြို့က ဆီဆိုင်ကြေငြာ ဆိုင်းဘုတ်လေးတွေ လာကြေငြာ ပြတာပါလို့။
Photo - Aung Ko Thet
အထက်မြန်မာနိုင်ငံ ကိုယ်စားပြု စက်သုံးဆီ တင်/ချ ဆိပ်ကမ်းသစ်ကြီး မန္တလေးတိုင်းဒေသကြီး၌ တည်ဆောက်မည် ▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄
အထက်မြန်မာနိုင်ငံ ကိုယ်စားပြု စက်သုံးဆီ တင်/ချ ဆိပ်ကမ်းသစ်ကြီး မန္တလေးတိုင်းဒေသကြီး၌ တည်ဆောက်မည် ▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄ ®®®®®®®®®®®®®®®®®®®®®®®®®®®®®®®®®®®®®®®® မင်းထက်အောင် (မန်းကိုယ်ပွား) မန္တလေး ဖေဖော်ဝါရီ ၂၇ အထက်မြန်မာနိုင်ငံကိုယ်စားပြု နိုင်ငံတကာအဆင့်မီ စက်သုံးဆီ တင်/ ချ ဆိပ်ကမ်းကို မန္တလေးတိုင်း ဒေသကြီး အမရပူရမြို့နယ် ရွှေကြက်ယက်နှင့် ဘုန်းတော်နိုင်ငံ ကျေးရွာအုပ်စု အိုးတုတ္ထတန်းလမ်း အနောက်ဘက် ဧရာဝတီမြစ်နှင့် ဒုဋ္ဌ၀တီမြစ်ဆုံအနီး၌ မြန်မာ့ စွမ်းအင်ကဏ္ဍဖွံ့ဖြိုးရေး အများပိုင် ကုမ္ပဏီလိမီတက်က တည်ဆောက် သွားမည်ဖြစ်ကြောင်း သိရသည်။ မန္တလေးတိုင်း ဒေသကြီးသည် မြန်မာနိုင်ငံအလယ်ပိုင်း၌ တည် ရှိ၍ ကျန်တိုင်းဒေသကြီးနှင့် ပြည်နယ်များသို့ ဆက်သွယ်ရန် ဗဟိုပြုရာ ဒေသကြီးဖြစ်သည်နှင့်အညီ ကုန်သွယ်မှုကဏ္ဍအပါအဝင် စက်သုံးဆီ ဝယ်ယူဖြန့်ဖြူးမှု အလွန် များပြားလာခြင်းကြောင့် လက်ရှိ သယ်ယူပို့ဆောင်နေသည့် မန္တလေး ဆိပ်ကမ်းနေရာတွင် မီးဘေး အန္တရာယ်စိုးရိမ်ရ၍ အန္တရာယ်ကင်းစွာ သယ်ယူဖြန့်ဖြူးပေးရန် ရည်ရွယ်ချက်ဖြင့် ယင်းစီမံကိန်းကို ခွင့်ပြုပေးခဲ့ကြောင်း ဖေဖော်ဝါရီ ၂၇ ရက်က ကျင်းပသည့် စက်သုံးဆီ တင်/ချ ဆိပ်ခံတံတားနှင့် ဆီသို လှောင်ကန်များ၊ ရုံးအဆောက်အအုံများ ပန္နက်တင်မင်္ဂလာအခမ်းအနားတွင် တိုင်းဒေသကြီး ၀န်ကြီးချုပ် ဦးရဲမြင့်က ပြောကြားသည်။ "အခု ရွေးချယ်ထားတဲ့နေရာက မြေသားခိုင်မာပြီး လမ်းပန်း ဆက်သွယ်မှု လွယ်ကူတဲ့အပြင် မီးဘေးအန္တရာယ်အတွက် လုံခြုံ စိတ်ချရတဲ့နေရာဖြစ်တယ်။ တစ်ဦးပိုင် လုပ်ခြင်းထက် စနစ်တကျ လုပ်ကိုင်နိုင်အောင် အများပိုင် ကုမ္ပဏီအနေနဲ့ လုပ်ကိုင်ခွင့်ပေးခဲ့တယ်။ ဒါကြောင့် အထက်မြန်မာနိုင်ငံ ကိုယ်စားပြု စက်သုံးဆီ တင်ပို့ဖြန့်ဖြူးနိုင်မယ့် ဆိပ်ကမ်းကြီး ပေါ်ပေါက်လာပြီး သက်သာသော ဈေးနှုန်းအရည် အသွေးပြည့်မီတဲ့ စက်သုံးဆီတွေကို သုံးစွဲနိုင်မယ်လို့ ယုံကြည်ပါတယ်" ဟု ၎င်းကပြောသည်။ နိုင်ငံတော်က စက်သုံးဆီလုပ်ငန်းအား ပြည်တွင်း ပုဂ္ဂလိက လုပ်ငန်းရှင်များသို့ လွှဲပြောင်းပေးခဲ့ရာ မြန်မာနိုင်ငံသား စက်သုံးဆီလုပ်ငန်းရှင်များ အနေဖြင့် စနစ်တကျရှိသော စက်သုံးဆီ တင်သွင်း/ သိုလှောင်/ ဖြန့်ဖြူး/ ရောင်းဝယ်ခြင်း ဆိုင်ရာ လုပ်ငန်းများ ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်စေရန် ၂၀၁၃ ခုနှစ် ဇန်န၀ါရီလ ၁ ရက်တွင် စက်သုံးဆီ လုပ်ငန်းရှင် ကုမ္ပဏီ ၅၂ ခု ပါဝင်သည့် မြန်မာ့စွမ်းအင်ကဏ္ဍ ဖွံ့ဖြိုးရေး အများပိုင် ကုမ္ပဏီလီမီတက်ကို ဖွဲ့စည်းခဲ့ကြောင်း သိရသည်။ "ဒီလို ဖွဲ့စည်းလုပ်ဆောင်ခဲ့လို့ စက်သုံးဆီဈေးနှုန်းတွေ ကျဆင်းလာပြီး အရည်အသွေး မှန်ကန်စွာ ရောင်းချ နိုင်တယ်။ နိုင်ငံတော်အတွက်လည်း အခွန်ငွေတိုးလာတယ်။ အဓိက ပင်လယ်ဝင်ပေါက်မှာ အတင်/ အချ လုပ်နိုင်အောင် ရန်ကုန်မှာ သီလဝါ ဆိပ်ကမ်း တည်ဆောက်ပြီး ပြည်တွင်း ကို ဖြန့်ဖြူးဖို့ စရိတ်သက်သာတာက ရေကြောင်းက အကောင်းဆုံးပါ။ သယ်ယူပို့ဆောင်ရေးမှာ လိုအပ်တဲ့ ဆိပ်ခံတံတားတွေ၊ ဆီသိုလှောင် ကန်တွေ လုပ်ဖို့ မန္တလေးမှာ ပထမဆုံး တည်ဆောက်သွားမှာပါ" ဟု မြန်မာ့ စွမ်းအင်ကဏ္ဍ ဖွံ့ဖြိုးရေးအများပိုင် ကုမ္ပဏီဥက္ကဋ္ဌ ဒေါက်တာဝင်းမြင့် က ပြောသည်။ အဆိုပါ စက်သုံးဆီ တင်/ ချ စီမံကိန်းသည် မြေဧက (၄၁ ဒသမ ၁)တွင် ဂါလန်နှစ်သန်းဆံ့ ဆီသို လှောင်ကန် ၃၂ လုံး၊ ဆီတွဲများ ဆိုက်ကပ်ရန် ဆိပ်ခံတံတား လေးစင်းနှင့် ဆီသယ်ယာဉ် ၁၃၆ စီးအား တစ်ပြိုင်တည်း ဆီဖြည့်နိုင်သည့် နေရာများနှင့် မီးဘေးလုံခြုံရေး အတွက် ဂါလန်ငါးသိန်းဆံ့ ရေကန် တည်ဆောက်မည် ဖြစ်ကြောင်း လာမည့် ခြောက်လတွင် လုပ်ငန်းများ စတင်လည်ပတ်မည်ဖြစ်၍ တစ်နှစ် အတွင်း စီမံကိန်းပြီးစီးမည်ဖြစ်ကြောင်း သိရသည်။
ရေတပ်ပင်မစက်မှုလက်မှုတပ်က တည်ဆောက်ခဲ့ပြီး ၂၀၁၄ ခုနှစ်က တပ်တော်ဝင်ခဲ့တဲ့ အမြန်ကင်းလှည့်ရေယာဉ်ငယ်များကို မြန်မာ-ဘင်္ဂလားဒေ့ရှ် နယ်စပ်ရေပြင်စည်းရိုးမှာ လုံခြုံရေးတာဝန်ထမ်းဆောင်နေတဲ့ ပြည်သူ့ရဲတပ်ဖွဲ့ဝင်များနဲ့အတူ တွေ့မြင်ရစဉ်။
Photo Credit: Win Yetun
ပင်းတယမြို့နယ်သအယ်ပင်ကျေးရွာ ဦးချစ်ရာ+ဒေါ်မြသန်း တို့နေအိမ် နောက်ချေးဆွေးပုံ တူးရာမှ သန္ဓေတည်၍ ထူးဆန်းစွာ နွားကလေး ပေါ်လာပြန်တယ်ဗျ။
Photo - Shwe DaNu
via - Win Min Phyo
"ကုလားနဲ့ ယူတဲ့ ဗမာမရဲ့ မင်္ဂလာပွဲကို ရွာသားတွေ ဂဲနဲ့ ထုလွှတ်မည်"
"ကုလားနဲ့ ယူတဲ့ ဗမာမရဲ့ မင်္ဂလာပွဲကို ရွာသားတွေ
ဖေဖဝါရီ ၂၇ ၂၀၁၆ မကွေး
မကွေးတိုင်း မင်းဘူး ( စကု ) မြို့နယ် ကုန်းသားကျေရွာက ဒေါ်သိန်းသိန်းစိုး၏ သမီး မနွေးနွေးအောင်ဟာ လာမည့်မတ် လ ၁ ရက်နေ့ တွင် နက်မောက်မြို့က ကုလား မောင်ဇေမျိုဦး နဲ့ သူမရွာမှာ မင်္ဂလာဆောင် တော့မှာဖြစ်ပါတယ်။
သူမ ပထွေး ဦးဇော်မိုးဟာလဲ မူဆလင်ကုလားဖြစ်ပါတယ်။
ကုလားက ဗုဒ္ဓဘာသာလို့ပြောသော်လည်း ရွာသားတွေ အမြင်မှာက မိန်းကလေးက မင်းဘူး၊ ကုလားက နက်မောက်သားဖြစ်ပြီး ရန်ကုန် တိုင်းဒေသကြီး တရားလွှတ်တော်မှာ ဖေဖဝါရီ ၂၅ နေ့က သွားပြီး နှစ်ဦး သဘောတူ လက်ထပ် တာကို ထောက်ဆသောအားဖြင့် ဒီကုလားမရိုးသား ဘူးလို့သုံးသပ်နေကြပါတယ်။
သူမပထွေးကလဲ မူဆလင်ကုလား ဖြစ်နေတော့
နောက် ဘယ်ကုလားပဲဖြစ်ဖြစ် ရွာကို အဝင်ခံတော့မှာ မဟုတ်တဲ့ အတွက် မင်္ဂလာ ဆောင်တဲ့နေ့ ကို ရွားသားများက ခဲနဲ့
ထုလွှတ်မယ်လို့သတင်းရရှိပါတယ်။
၂၇ ၂ ၂၀၁၆ 9:01 PM
ကလေးမြို့ အထွက် မြစ်သာမြစ်ဘေးက ပြင်သာရွာက အုန်းပင်မှာ ရေတက်ခဲ့တဲ့ အမှတ်အသားတွေကို မှတ်သားထားတာတွေ့နုိုင်ပါတယ်။ မနှစ်က သမ္မတကြီး အဲဒီရွာကို ရောက်တော့ ပျက်စီးသွားတဲ့ အိမ်တွေကို ပြန်ဆောက်ပေးဖို့နဲ့ ရွာအထိ ကွန်ကရစ်လမ်းခင်း ပေးဖို့ စီစဉ်ပေးခဲ့ပါတယ်။
ဖေ ၂၇ ရက်နေ့က အဲဒီရွာကို သမ္မတကြီးသွားတော့ ရွာက အမျိုးသမီးတစ်ဦးက သူတို့ ရင်ဆိုင်နေရတဲ့အခက်အခဲကို တင်ပြပါတယ်။ အဲဒီရွာက လက်လုပ်လက်စားတွေက သဲလုပ်ငန်းနဲ့ အသက်မွေးပါတယ်။
မြစ်သာမြစ်တစ်ဖက်ကမ်းက သဲကုို လှေငယ်နဲ့ တူးပြီး ဒီဘက်ကမ်းကို သယ်ရောင်းတာပါ။ ငွေစိုက်ထုတ်လုပ်သူက ရှစ်ယောက်လောက်ရှိပြီး ကျန်တဲ့သူတွေက သဲတူး၊ သဲသယ် ၀င်လုပ်ကြတာပါ။
ဒီနှစ်မှာတော့ မြစ်အထက်ဘက်မှာ လုပ်ငန်းရှင်တစ်ဦးက စက်နဲ့ သဲကုို ကမ်းအထိ မှုတ်တင်ပြီးရောင်းတယ်။ လုပ်အားမသုံးရတော့ ဈေးကလည်း ပြင်သာရွာကဈေးထက် သက်သာတာပေါ့။ ဒီတော့ ဒီရွာမှာ သဲလုပ်ငန်းက ဈေးကွက်ပျက်မလိုဖြစ်နေတဲ့အတွက် တစ်ခုခု လုပ်ပေးဖို့ဆိုပြီး သမ္မတကြီးကိုတင်ပြတာပါ။
သမ္မတကြီးက ခင်ဗျားတို့ စက်ဝယ်နုိုင်အောင် သမ၀ါယမက ငွေထုတ်ပေးမယ်ဆုိုတော့ လည်းမဖြစ်ပြန်ဘူး။ ဘာလို့လည်းဆိုတော့ စက်သုံးမယ်ဆိုရင် သဲတူး၊ သဲသယ် အလုပ် နဲ့ အသက်မွေးသူတွေ အလုပ်လက်မဲ့ဖြစ်ကုန်မယ်၊ဒါကြောင့်စက်မလိုချင်ဘူးတဲ့။ တစ်ဖက်ကလည်း ဈေးကွက် စနစ် အရ သက်သာတဲ့ဈေးနဲ့ရောင်းနေတာကို ဈေးတင်ခုိုင်းပြန်ရင်လည်း လက်တွေ့မကျပြန်ဘူး။
နောက်ဆုံးတော့ သဲဈေးကို ဖြစ်နုိုင်သမျှ ညှိပေးဖို့၊ ဒီရွာသူရွာသားတွေအတွက် သဲလုပ်ငန်း တစ်ခုထဲကိုပဲ မှီခိုမနေရအောင် အခြား အလုပ် အကိုင် တွေရရှိနုိုင်ဖို့အတွက် ပန်းရံ၊ လက်သမား စတဲ့ လုပ်ငန်းခွင်ကျွမ်းကျင်သင်တန်းတွေကို နယ်စပ်ရေးရာဝန်ကြီးဌာနလက်အောက်သင်တန်းကျောင်းက လာသင်ပေးဖို့၊ အဲဒီ သင် တန်းဆင်းတွေကို ဒေသတွင်း ပြန်လည်ထူထောင်ရေးလုပ်ငန်းများဆောင်ရွက်ရာမှာ အသုံးပြုဖို့၊ ရွာက ကျောင်း မနေ တဲ့ကလေးတွေကို စာရင်းကောက်ပြီးကျောင်းတက်နုိုင်အောင် ကူညီပေးဖို့၊ မြစိမ်းရောင် စီမံ ကိန်းနဲ့ ရွာဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ရေးကိုဆောင်ရွက်ပေးဖို့ အားလုံးဆွေးနွေးဆုံးဖြတ်ခဲ့ကြပါတယ်။
တစ်ချို့ကိစ္စတွေက လွယ်လွယ်နဲ့ ရှင်းလို့ရမယ်လို့ ထင်ရပေမယ့် တစ်ကယ်ကျ တော့ နောက်ကွယ်မှာ ဆက်စပ်နေတဲ့ အချက်တွေအများကြီးရှိတယ်ဆိုတာ ဒီကိစ္စလေးမှာ တောင် တွေ့ရပါတယ်။
ဘိန်းခင်းဖျက်ဆီးရေးဆိုတဲ့ ခေါင်းစဉ်နဲ့ စလိုက်တဲ့အဖွဲ့ ပြဿနာပေါင်း သောင်းခြောက်ထောင်... လူပေါင်းများစွာ ဒုက္ခရ.. ဒဏ်ရာရ စီးပွားပျက်နေပြီ...
ဘိန်းခင်းဖျက်ဆီးရေးဆိုတဲ့ ခေါင်းစဉ်နဲ့ စလိုက်တဲ့အဖွဲ့
လူပေါင်းများစွာ ဒုက္ခရ.. ဒဏ်ရာရ စီးပွားပျက်နေပြီ...
ပက်ဂျိဆန်စဖွဲ့ပြီး မကြာဘူး ရွာတွေကနေ တိုင်စာတွေလာတယ်...
သူတို့နဲ့ ပက်သတ်တဲ့အခင်းကျတော့ မဖျက်ဖူး...
ရွာတွေကို အနိုင်ကျင့်တယ်.. ရှမ်းတွေကိုလည်း အနိုင်ကျင့်တယ်ဆိုပြီး
ရွာသားတွေကလည်း... လာရင် ဆော်မယ်... ကစ်မယ်ဆိုပြီး
စောင့်နေတဲ့သူတွေရှိလို့ တပ်နဲ့ ရဲက စေတနာနဲ့ တားတယ်..
အဲဒါကိုမီဒီယာက တပ်ကပဲ ဘိန်းခင်းတွေကိုမဖျက်စေချင်လို့
နောက်ဆုံး ညှိုနှိုင်းပြီးတပ်က လွှတ်လိုက်တယ်..
လုံခြုံရေးကိုတော့ ရာနှုန်းပြည့် တာဝန်မယူနိုင်ဘူးပေါ့...
ဝေမိုး ရွာအရောက်မှာ ရွာသားတွေကလည်း ရွာထဲမလာဖို့တားတယ်..
ပက်ဂျိဆန်ကလည်း... ဟိုအော် ဒီအော်လုပ်တယ်..
အဲဒီမှာ ပစ်ကြ ခတ်ကြဖြစ်ပြီး... ပက်ဂျိဆန်အဖွဲ့က
ဓါက်ဆီနဲ့ ပုလင်း မီးလောင်အောင်လုပ်ပြီး မီးတွေရှို့တယ်...
တရုတ်လုပ် ဗုံးတွေသုံးတယ်... ရွာသားတွေနဲ့ ပြဿနာဖြစ်တယ်...
နောက်ဆုံး ဒီအပျက်အဆီးတွေကို တပ်မတော်ကပဲ ၀င်ရှင်းပေးရတယ်...
မီဒီယာတွေ ... တပ်က တားတဲ့သတင်းပဲ ဖော်ပြပြီး
ဒီအခြေအနေ မှာ ဖြစ်သွားတဲ့သတင်းကိုတော့ ဖုံးကွယ်ထားတယ်....
သီပေါမြို့ မြို့လယ်ရပ် နှင့် ဇက်စုရပ် ဆက်ယှက်နေသော...
"TNLA သောင်းကျန်းသူ အဖွဲ့၏ ဝါဒဖြန့် ဘိန်းခင်းဖျက်စ...
ပရမတ္ထတရား၏ ဆန့်ကျင်ဘက်များ -----------------------...
ထိုင်းနိုင်ငံတွင် ကမ္ဘာလှည့်ခရီးသွား အမျိုးသမီး ၂ ဥ...
အထက်မြန်မာနိုင်ငံ ကိုယ်စားပြု စက်သုံးဆီ တင်/ချ ဆိပ...
ရေတပ်ပင်မစက်မှုလက်မှုတပ်က တည်ဆောက်ခဲ့ပြီး ၂၀၁၄ ခုနှစ...
ပင်းတယမြို့နယ်သအယ်ပင်ကျေးရွာ ဦးချစ်ရာ+ဒေါ်မြသန်း တ...
"ကုလားနဲ့ ယူတဲ့ ဗမာမရဲ့ မင်္ဂလာပွဲကို ရွာသားတွေ ဂ...
ကလေးမြို့ အထွက် မြစ်သာမြစ်ဘေးက ပြင်သာရွာက အုန်းပင...
ဘိန်းခင်းဖျက်ဆီးရေးဆိုတဲ့ ခေါင်းစဉ်နဲ့ စလိုက်တဲ့အဖ...
ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်နှင့် ကာ/ချုပ် ညှိနှိုင်းမှု ပြီးစ...
ပြားကိုးဆယ် ပုဂံ မဲဆန္ဒနယ် ဒေါ်ခင်စန်းလှိုင် ******...
မနေ့က ပြည်သူ့လွှတ်တော်ထဲမှာ ပုလဲမဲဆန္ဒနယ်က ဒေါ်ခင်စန...
ခက်တော့လဲ ခက်တယ်ဗျာ ..... ဖေ့စ်ဘွခ်ပေါ်ကစာဖတ်ပြီး...
စဉ်းစား စရာ }
အိမ်အကူကို နှိပ်စက်ခဲ့သည့် အိမ်ရှင်အမျိုးသားကို အလ...
ယခု ၂၆.၂.၂၀၁၆ ညနေ ၄:၀၂ pm သံတွဲ ဆေးရုံရှေ့ မီးလောင...
မြစ်ကြီးနားမြို့ ဆန္ဒပြပွဲ မြင်ကွင်းများ...
စီတန်းလှည့်လည်သူများကို မြို့ တော်ခန်းမ ရှေ့ မှာ ...
ကချင်ပြည်နယ်ကို စစ်အုပ်ချုပ်ရေး ပေးဖို့ လိုပြီ ==...
လူမြင်ကွင်းမှာရိုက်နှက်ဆုံးမတာ မှန်ကန်တယ်လို့ ယြုံ...
မြဝတီမြို့နှင့် ၈ မိုင်ခန့်ကွာဝေးသော အင်ကြင်းမြိုင...
မြန်မာနိုင်ငံရဲ့ ISIS အဖွဲ့ပဲ .. ဆက်ကြေးမပေးရင် ဘိ...
ဘိန်းခင်းတွေ ဖျက်တာ.. ကောင်းတဲ့အလုပ် ၊ လုပ်သင့်တဲ့...
တည်နေရာ။ ကလိန်အောင်မြို့ ၊ တနင်္သာရီတိုင်း အံသြ ဝမ်း...
မိုးညှင်းမြို့ သာသနာပြုစွမ်းရည်မြင့် သင်တန်းသားမျာ...
ဘိန်းစိုက်ခင်းဖျက်ဆီးခံရသည့် ဒေသခံပြည်သူများအတွက် ...
မန်းရွှေစက်တော်ဘုရားပွဲတော်ရှိ မန်းချောင်းအတွင်း ရေ...
ဆက်သွယ်ရေးအော်ပရေတာများ Broadband Wireless စနစ် ဝင...
၅.၃.၂၀၁၆ မှာလုပ်မယ့် .. နိုင်ငံတော်သမ္မတကြီး ဂါရဝပြ...
မြစ်ဆုံ မီဒီယာ ၃ နှစ်ပြည့်အမှတ်တရဘားရှင်းအသစ်ထွက်ရ...
တရားမဝင် Home Stay လုပ်ငန်းများကို တိုင်ကြားပါက အေ...
တိုင်းရင်းဆေးတရားမဝင် ယူဆောင်လာသည်ဟုဆိုကာ မြန်မာန...
"အစ္စလာမ့် အန္တရာယ် ကြောက်မက်ဖွယ်" *****************...
လက်ရှိ ပြည်ထောင်စုအစိုးရက ပထမအကြိမ် ပြည်ထောင်စုလွှတ...
"ပက်ဂျီဆန်အဖွဲ့လုပ်ရပ်တွေ မင်းမဲ့စရိုက်ဆန်ဆန် ဖြစ်...
အစိုးရသစ်ထံမှ ရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုအသုံးစရိတ် တောင်း...
"ပက်ဂျီဆန်(PJS) အဖွဲ့၏ မင်းမဲ့စရိုက်ဆန်ဆန် နှိပ်စက...
ကျား ဈာပန ကျင်းပရေးကော်မတီကတော့ မီးရှို့ သဂြိုလ် ...
PJS ဖွဲ့ကို တားဆီးခဲ့သည့်အဖွဲ့များအနက် ၂၃ ဦးဖမ်းမ...
ပက်ဂျီဆန်အဖွဲ့ရဲ့ လှုပ်ရှားမှု သတင်းတွေကို စောင့်ကြည...
Pat Jasan အဖွဲ့ တွေကို လက်ပစ်ဗုံးတွေနဲ့ ပစ် ၊ေ
မြစ်ကြီးနား ရဲမှူးကြီးရဲ့အိမ်ရှေ့မှာလည်း ကချင်ပြ...
ဘိန်းခင်းတိုက်ဖျက်ရန်တက်လာသည့် ပတ်ဂျဆန်အဖွဲ့အား သေ...
လူထုအခြေပြု မူယစ်ဆေးဝါးတိုက်ဖျက်ရေး အဖွဲ့ Pat JaSa...
နိုင်ငံပိုင်မြေ၊ စက်ရုံ၊ စီးပွားရေးလုပ်ငန်းများ အလ...
ဒဏ်ရာ ရသူများ ဆေးဝါးကုသရန် ကချင်ပြည်သူ/သာူးများမှ ...
ဖေ့စ်ဘွတ်ခ်ပေါ်တွင် ချစ်ရေးဆိုကာ တရားဝင် ဇနီးသုံးဦ...
လူထုအခြေပြု မူးယစ်ဆေးဝါးတိုက်ဖျက်နှိမ်နင်းရေး တပ်...
pjs အုပ်စု(၄) ကို ဆဒုံးသေဒခံတွေ ပြန်လည်တိုက်ခိုက်
အစိုးရစီမံကိန်းတွေအပေါ် အရေးကြီးအဆိုတင်တာ နိုင်ငံတေ...
"ဗုဒ္ဓဘာသာဝင်များ သတိထားသင့်သည့် မီဒီယာဂျီဟတ်'" ***...
မန်းချောင်းဖျားတစ်လျှောက် မိုးသာစွာ ရွာသွန်းမှုမရှိ...
နွေရာသီ ဓာတ်အားလုံလောက်စွာ ဖြန့်ဖြူးပေးနိုင်ရန်အတွ...
မိုင်းဖောက်ခွဲ သေနတ်များဖြင့် ပစ်ခတ်ခြင်းများ ကြော...
ရွှေစက်တော်ဘုရားရေကြီးဖို့ အလားအလာမမြင်မိသေးပါ။ ဒီေ...
ဘိန်းစိုက်ခင်း ဖျက်ဆီးရေးအပေါ် ချဉ်းကပ်မှု မတူညီ
နောက်ကလိုက်သွားတဲ့ ယာဉ်တန်းပါ ထပ် တိုက်ခံရပါသတဲ့ ...
တစ်ဖြေးဖြေး လာချေပြီလေ တောက် !! အသည်းနာတယ် ဝင်...
အများပြည်သူသို့အသိပေး ပန်ကြားခြင်း **************...
ကျားကြီးအား ဖမ်းမိ နှိမ်နင်းနိုင်ပြီး ------------...
အထက ၄ လှိုင်သာယာမှာ စာမေးပွဲဖြေတာ ၂ တန်းကလေးကို ၃ တ...
ကချင်ပြည်နယ် နေရာ အနှံ့အပြား ကိုယ်ထူကိုယ်ထ ကချင်လ...
အင်အား (၂၀၀၀)ကျော် ရှိသည့် လူထုအခြေပြု မူးယစ်ဆေးဝါ...
''ခင်ဗျားတို့ မသိတဲ့ ကျွန်တော်တို့ ခြေလျင်" -----...
PJS လူထုအခြေပြု မူးယစ်တိုက်ဖျက်ရေးအဖွဲ့များ ကံပိ...
မီးဘေး အန္တရာယ် တွေ့ကြုံ ရသော အခါတွင် ရဲ ဝံ့ စွန့်...
ဝိုင်မော်မြို့နယ် ဘွမ်တောင် ကျေးရွာမှာ ကျန်နေခဲ့သည...
ရန်ကုန်တိုင်းဒေသကြီး၊ ခရိုင်(၄)ခရိုင်အတွင်းရှိ အမျ...
မြစ်ကို ကြိုးနဲ့ဖြတ်ကူးပြီး ကျောင်းသွားတက်ရတဲ့ နီေ...
ရွှေစက်တော်ဘုရားပွဲ ထင်းခွေပြန်လာ ခဏနား နံနက် ၁၁ နာ...
တွေကြပြီပေါ့ KIA +KBC ရယ်..
ကချင်ပြည်နယ်က... ၀ိုင်းမော်၊ ချီဖွေ ၊ တနိုင်း၊ ပူတ...
အဟက် ... ပတ်ဂျဆန်အဖွဲ့ ကို မတားဖို့... ဒီနေ့...
မဲရွေးချယ်တုန်းက အဲလို ကလေးလေးတွေ စားပွဲထိုးကလေးလေ...
တိုင်းတစ်ပါးသားများကို ရုံးထိုင်ခွင့်ပေးသည့် ကမ္ဘာ့...
Pat Jasan လူထုအခြေပြု မူးယစ်ဆေးဝါး တိုက်ဖျက်ရေး အဖ...
မန္တလေး မတ္တရာလမ်း မိုင်တိုင် ၂၀ နှင့် ၂၁ ကြားတွင် စ...